> Resource > iPod > Easy hab ay isu Abaabula Music on iPod
Daal ee hoos boggan ugu dhaadhacaya boqolaal heesaha oo dhan si aad u ogaato kuwa aad doonayay? Haddii aad dhibaa, waxaad u baahan kartaa qabanqaabiyaha music ah inuu kaa caawiyo inaad abaabulo music on iPod. Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) waa xoog badan iPod qabanqaabiyaha music ah. Waxay ku siinaysaa fursad ah inuu wada xajiyo oo music on iPod qabanqaabiyaa daqiiqad kasta aad.
Iyada oo ay caawimaad, waxaad tahay karin inuu abuuro iyo playlists magaca si loo badbaadiyo songs leh qaababka kala duwan. Marka aad lumiso maktabadda Lugood, waxaad u soo dhoofin karaan songs mar. Haddii aad go'aansato in aad tirtirto oo aad songs rabin, barnaamijkan kuu ogolaanaysaa inaad iyaga ka dhaqaajiyo in Dufcaddii.
Download this qabanqaabiyaha music iPod in ay isku dayaan abaabulka music on iPod.
Fiiro Gaar ah: Tani qabanqaabiyaha music iPod - Wondershare TunesGo aad ku xoojiya sidii ay u abaabulaan music on iPod taabto, nano iPod, shaandheeyn lagu iPod iyo classic iPod. Hubi info ka faahfaahsan oo ku saabsan taageeray daydo iPod iyo macruufka . Version Mac of qalab taageertaa iPod xiriiri 4/5 socda macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 & macruufka 5.
Sida loo abaabulo music on iPod
In qayb hoose, waxaan jeclaan lahaa in ay diiradda saaraan abaabulka music aad iPod la version Windows ah. Ku rakib oo kadibna tan iPod qabanqaabiyaha music kombuutarka.
Tallaabada 1. Isku aad iPod in kombuutarka oo isticmaalaya cable USB ah
Ka dib markii ordaya this qabanqaabiyaha music iPod, waa in aad ku xidhi aad iPod in PC ka deeruhu cable USB ah oo wuxuu galay. Ka dib markii aan ogaanno aad iPod, taas qabanqaabiyaha music iPod u muujin doonaa in uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Abaabulaan music iPod
In geedka buugga bidix, guji "Media". Oo guji "Music". In uu furmo suuqa music ah, waxaad samayn kartaa waxyaabo badan si aad si fiican u abaabulan heeso.
Ku dar files music fayl ka PC in iPod . By gujinaya saddexagalka "Add" ku hoos, waxaad dooran kartaa in mid uun ku dar fayl music ama files music aad iPod.
Ku rid playlists Lugood in iPod . Si aad u samee, waa in aad ku dhufo "playlist" geedka buugga bidix. Markaas, guji saddexagalka "Add"> "Add Lugood Playlists"> "OK" hoos.
Beddelaan music kuwo saaxiibtinimo iPod . Barnaamijkan wuxuu taageeraa diinta AAC, AC3, daanyeer, AIFF, Amr, AU, FLAC, MKA, MPA, MP2, OGG, WMA, 3G2 in MP3.
Info Kulanka Xiisaha Leh heeso . Dooro hees iyo guji midig. Dooro si ay u arkaan in ay hantida, sida artist, markii waarta iyo album.
Heeso ka mid playlist in playlist kale ee caadiga ah u dhaqaaji . Dooro heeso ka dhigi click midig. Dooro "Dhoofinta in" dooro playlist caadi ah.
Fiiro gaar ah: version Mac of qalab this ma taageero ku daray playlists Lugood in iPod.
Isku day TunesGo in uu abaabulo music on iPod.